Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caafimaadka iyo caafimaadka Shiinaha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Caafimaadka iyo Daryeelka Caafimaadka
Alaabooyinka daryeelka caafimaadka iyo caafimaadka waa alaab iyo qalab caafimaad oo ay isticmaalaan shaqsiyaadka ama xarumaha caafimaadka si ay uga hortagaan una daaweeyaan cudurada iyo si ay u ilaaliyaan una horumariyaan caafimaadka jidhka iyo maskaxda.
Waxaan bixinaa noocyo kala duwan oo ah alaabada Daryeelka Caafimaadka iyo Caafimaadka oo leh tayo la isku halayn karo, oo ay ku jiraan qalabka duugista, miisaska duugista iyo kuraasta, daryeelka shakhsi ahaaneed iyo alaabta daryeelka caafimaadka, dhejisyada jimicsiga jimicsiga iyo boorsooyinka, iwm.
Isticmaalka sayniska ee alaabta caafimaadka iyo daryeelka caafimaadka waa cabbir muhiim ah si loo xaqiijiyo badbaadadayada shakhsi ahaaneed iyo caafimaadkayaga. Bailikind daryeelka nolosha iyo caafimaadka!
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Caafimaadka iyo Daryeelka Caafimaadka oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Caafimaadka iyo Daryeelka Caafimaadka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Caafimaadka iyo Daryeelka Caafimaadka la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.